Astaamaha lagu xasuusto sannad guurrada ciidammada Xoogga dalka Soomaaliya
Sannad guurrada ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed oo sannadkan ka baddelnaan doonta sannadihii horre, sababta maxay tahay? Sannadkanse maxaa laga filan karaa oo isbaddel ah ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed jiritaankooda.
Sannadihii aynu soo dhaafnay, sannad guurrada ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed waxay u dhacday siyaabo kala duwan, sannadkaanse waxaa ka muuqanaya isbaddello xooggan, kuwaasi oo dhammaantood ku xardhan guullo ay ummadda Soomaaliyeed u riyaaqday.
Ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed marka laga hadlayo waxa ay ka baddellan yihiin guud ahaan ciidammada Soomaaliya, hasa yeeshee Sababtaasi maxey tahay? Ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed magacooda ha raagge, waxa ay sumcad iyo sharaf aan la illaabi Karin ku leeyihiin Qaaradda Afrika iyo guud ahaan caalamka, calaamadaha taariikhiga ah ee ciidammada Xoogga lagu xasuusto, waxaa ka mid ah.
Markii dhidibada loo taagay ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed 12-kii April sannadkii 1960-kii, iyaga oo ka kooban 27 sargaal ayeey wax ka yar Shan sannadood ku gaareen ciidan dhammeystirsan oo dalka dhan Difaaciisa u diyaarsan.
Marka aad xuurraansato raggii waayo joogga u ahaa dhismaha iyo awooddii ay lahaayeen ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed, sida S/Guud Maxamed Cali Samatar, waxa ay xaqiijiyeen dadaalka iyo waqtiga ku baxay xoojinta iyo Tayenta ciidammada Xoogga in ay ahayd mid ay u dhammaayeen guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Xulashada Askariga Xoogga ku biirraya waxa lagu xulan jiray astaan Waddaniyaddeed, taasi oo raali gallin jirtay mariiska ummadda Soomaaliyeed, haddii aan intaasi uga guddubno, isbaddelka 21 sanno kaddib ka muuqda ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waxa laga filan karo sannadha soo aadan.
Marka laga hadlayo sannad guurrada 52-aad ee ku beeggan 12-ka April hasa yaashee aan maanta u dabaal daggeyno, waxa ay ka baddelnaan doontaa waayihii horre loo soo dhaafay, taasi oo ay sabab u tahay Laba arrimood oo muhiim ah, sida dhismaha ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed oo isbaddel xooggan uu ku yimid, haddana sii hiigsaya, sidoo kale guullo ay hoggaanka u hayaan ciidammada Xoogga dalka oo ay shacabka Soomaaliyeed ku mushaaxayaan.
Diyaarinta guullahaasi iyo dhismaha ciidammada Xoogga dalka Soomaaliya ee hadda jira, saraakiil iyo shacabka Soomaaliyeed ee dalka iyo dibedda ayaa uga mahad celiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed, oo ay ku tilmaameen mid ka mid ah Abaayaashii soo maray ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed.
Tan iyo markii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda la wareegay tallada hooggaanka dalka, waxa uu ku dhiirraday soo celinta iyo dhismaha ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidammada Qalabka Sida, waxaana arrintaasi ay dhallisay in maanta aan leenahay ciidammada kala duwan, isla markaana sannadaha soo socda looga fadhiyo in ay dib u hantaan kaalintooda ama astaamihii ay ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed lahaayeen, waxaana ku soo gabagabeynayaa Hambalyo diiran oo aan si wadajir ah uga direyno ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed.